Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2020 → septembre → 29 → Depiote Leva : Voaheloka roa taona an-tranomaizina
Omaly no niakatra fitsaràna tao amin’ny TPI (tribunal de première instance) Morondava ny raharaha mahakasika ny Depiote Leva, na Raveloson Ludovic, solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tao amin’ny distrikan’i Mahabo teo aloha. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana dia voaheloka higadra roa taona an-tranomaizina ny lehilahy. Sazy mihatra avy hatrany ! Ambonin’izay dia fantatra ihany koa fa terena handoa onitra 35 tapitrisa ariary amin’ireo olona nitory azy izy. Marihana fa vono narahana ratra niniana natao, fibodoana sy fanjakazakana tokana teo amin’ny sehatry ny fandraharahana no niampangàna ity olom-boafidy teo aloha ity. Hitan’ny fitsaràna fa meloka tanteraka ingahirainy tao anatin’izay ka izao namoahan’ny fitsaràna didy hampigadra azy izao. Tsiahivina fa vao herinandro vitsivitsy izay no voasambotry ny mpitandro filaminana ny lehilahy rehefa tsy hita tany nanjavonana efa ho volana maromaro. Hany ka voatery namoahan’ny fitsaràna didy fampisamborana.
Fastar 30 septembre 2020 at 19 h 08 min · Edit
dia taiza foana hono no nisy azy hatramin’izay dia tsy voarohirohy ve ny nitazona azy fa na ny madinika no tratran’izany dia lasa daholo any amponja miaraka amin(ny zaza madinika sy ny hatrany an-kibo angamba. Aza mba MADINIKA IHANY FA ALEO VAVENTY
Mareza 29 septembre 2020 at 12 h 14 min · Edit
Roa taona dia roa taona fa tsy roa na telo volana dia mahazo VONJIMAIKA indray.
Raha mbola tohizana ny fanadiovana ny fitsaràna dia tokony esorina koa ny lalàna manome ny atao hoe: VONJIMAIKA na hoe LIBERTE PROVISOIRE. Tsy maintsy tanterahana hatramin’ny farany ny sazy voalaza.
Raha mbola ho diovina ny fitsaràna dia tokony averina amin’ny lalàna velona ny fanamelohana ho faty CONDAMNATION à MORT ho an’ny olona mendrika izany… Ohatra ny namono olona @ fomba feno habibiana….ny namono sy nametaveta zaza tsy ampy taona…ny kidnapping avec meurtre sns.. sns…